Sheekh u dhashay Sweden oo ka yaabsaday Soomaalida ku nool aduunka gar ahaan Somalida Sweden! (Daawo Muuqaal+Warbiixn) – idalenews.com
Sheekh u dhashay dalka Sweden ayaa waxaa la sheegay inuu ka yaabsaday Soomaalida ku nool aduunka gar ahaan kuwo ku nool dalka Sweden ka dib markii uu sheekhaas uu si wanaagsan ugu hadli karo luqada Afka Soomaaliga.
Daawo Muuqaal Ahaan Wadaadka oo Siwanaagsan Afka Soomaaliga Ugu hadlaya
[vsw id=”Pc5YEckT6Qs” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]
Sheekhaan oo lagu magcaabo Björn Ali Göransson oo ah wadaad u dhashay dalka Sweden islamarkana qaatay diinta islaamka si wanagsana uga hadla afka Soomaaliga ayaa waxaa la sheegay inuu sheekhaas uu khudbada Jimcaha ugu turjumo jameecada Somaalida ah ee ku sugan masaajidka Afka Soomaliga, sheekhaan Swedishka ah ayaa dhawaantaan mar uu khudbada salada jimcaha ka aqriyey masaajid ku yaala magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxaa uu hadan walaalha Soomaaliyeed ugu turjumay qudbadii afka Soomaaliga iyadoona uu wadaadkaasi yahay mid si wanaagsan ugu hadla luqada afka Soomaaliga islamarkaasna aadan ka dareemeynin wax qalad ah ama jajabis si wanaagsana loo fahmaayo af Soomaaligiisa.
Ugu dambeyntiina iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen wadaadkaas islamarkaan ay ku tilmaameen mid fahmad wanaagsan maadaama uu isku turjumi karo af carabi iyo af Soomaali oo ah laba luqadood oo si aad iyo aad ah u adag. Sheekhaan ayaa waxaa ay dad badan ay rajaynaa in la arki doono muxaadarooyin badan oo uu ku jeedinaayo luqada af Soomaaliga.
Somali haysta Dhalashadda dalka Britain oo lagu maxkamadeyn doono Jesiiradda Qubrus